NIN ISKA QAYILAY UUN BAA YIDHAAHADA FAYSAL XISBIGA JEEBKUU KU SITAA | Toggaherer's Weblog
Xaflad balaadhan oo ay xilalka kula kala wareegayaan hogaankii hore ee garabka dhalinyarda xisbiga UCID iyo hogaan cusub oo ay doorteen dhalinyarada xisbigaasi ayaa xalay lagu qabtay Hutel Summer Time ee magaalada Hargeysa.
Xafladan oo ahayd mid heerka agaasimkeedu uu aad u sareeyay oo ay ka soo qayb galeen guddoomiyaha Xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe, Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Mud: C/ramaan Maxamed C/laahi (C/raxmaan Ciro), Masuuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi, aqoonyahano, dhalinyaradaha jaamacadaha dalka, garabyada dhalinyarada iyo haweenka ee xisbiga UCID.
Xafladan xil wareejinta oo ay xilka kula kala wareegayeen hoggaan cusub oo loo doortay garabka dhalinayarada ee heer qaran ee Xisbiga UCID iyo hogaankii hore.
Waxa xafladan hadal kooban ka jeediyay guddoomiyaha golaha wakiilada Mud: : C/ramaan Maxamed C/laahi (C/raxmaan Ciro) waxaanu sheegay in dhalinyaradu ay yihiin laf dhabarta dalka isla markaana looga baahan yahay in ay sida dimuqraadiyada ah ee ay isu dooranayaan ay xoojiyaan waxaanu u rajeeyay hogaanka cusub ee qabtay xilka dhalinyarada in ay halkaasi ka sii wadaan, xilka loo doortay.
Guddomiyaha xisbiga UCID Eng: Faysal Cali Waraabe, oo isaguna munaasibadaa xil wareejinta hadal ka jeediyay ayaa ku dheeraday barnaamijka xisbigiisu uu ugu talo talay dhalinyarada waxaanu ku nuux nuuxsaday in xisbiga UCID uu yahay xisbiga keliya ee dhalinyarada wax u qabta.
Waxaanu tilmaamay in xisbiga UCID taageerada ugu badan uu ka helo haweenka iyo dhalinyarada, waxaanu ku dooday guddoomiyuhu in xisbiga aanu u samayn in uu keligii haysto balse uu u sameeyay in dhalinyaradu ay noqdaan salaanka ay ka soo fuulaan siyaasada.
“Walaalayaal xisbiga UCID labada garab ee ku duulaa waa dhalinyarada iyo haweenka, aniguna markii aan xisbiga keligay ma lihi ee dadka dhalinyarada ah ayaa iska leh oo mustaqbalka la wareegi doonto, sida dimuqraadiyada ah ee ay isu dooranayaan waa midho ay iyagu samaysteen. Insha allaahu tacaala waxaan rajaynayaa in ay halkaa ka sii wadaan dedaalkooda. Dadka qaar ayaa yidhaahda Xisbiga Jeebka ayuu ku sitaa, walaalayaal nin iska qayilay ayaa iska leh Faysal xisbiga Jeebka ayuu ku wataa, xisbiganina waa mid ku dhisan wada tashi, dimuqraadiyad iyo wada tashi, Insha Allaahu tacaalaa xisbigani waxa uu socon doonaa 100 sano oo loo dabaal degi dooono Walalaalayaal xisbigani waa xisbiga dhalinyarada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahayba ay iska dhex arkaan” ayuu Eng: Faysal Cali Waraabe.
Waxa kale oo uu Faysal Cali Waraabe sheegay in hadii xisbigiisu uu talada dalka ku guulaysto uu Somaliland magaca ka badali doono, ciidamadana uu dirayska ka badali doono isaga oo waxyaabaha uu bedeli doono ka hadlayana waxa uu yidhi “Magaca Somaliland waanu bedalaynaa, Somaliland waan ka baxaynaa, magac fiican baan la baxaynaa. Dirayska booliska waan bedelaynaa, mid aynu leenahay baynu samaysanynaa, ka milatariga waanu badalaynaa mid aynu leenahay ayaynu samaysanynaa, sida aynu kaadhadhka dhalashada aynu u samaysanay. Somaliland sumadeena leh ayaynu samaysanaynaa”
Sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay Dr: Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada reer Somaliland oo isla munaasibadaana kaga dhawaaqay in uu ka mid noqday guddida fulinta ee xisbiga UCID, waxaanu Dr: Maxamed Rashiid Sheekh Xasan balan qaaday in uu ka mid noqon doono xibsigaasi isla markaana uu la shaqayn doono guddomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID.
“Marka hore inanka xidhiidhinayay xafladani waxa uu yidhi Dr: Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxa uu ku hadlayaa afka aqoonyahanka, balse caawa (Xalay) waxa ii dheer in aan ka mid ahay guddida fulinta ee xisbiga UCID, isla markaana aan garab iyo gaashaanba u noqonayo guddoomiyaha xisbiga UCID oo aan la shaqayn doono” ayuu Dr: Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo xalay si rasmi ah u shaaciyay in uu ka mid yahay xisbiga UCID iyada oo ay maalmihii ugu danbeeyay ay soo baxayeen in uu ka mid yahay murashaxiinta u taagan jagada madaxaweyne ku xigeenka ee xisbiga UCID dhexdiisa balse xalay taa kamuu cadayn xaflada.
Waxa isaguna munaasibadaa xil wareejinta ah ka hadlay Boobe Yuusuf Ducaale oo ka mid ah akadamiyada nabada, waxaanu sheegay in ay dhalinyaradu yihiin Ijiinka dhaqaajin kara horumarka uu dal hiigsanaayo iyo kuwa isbedel dhab ah keeni kara, waxaanu xusay Boobe in isku duubnida dhalinyarada ay wax ku heli karaan isla markaana uu codkoodu waxa ay doonayaan uu u goyn karaayo, waxaanu u soo jeediyay dhalinyarada in maalinta ay awooda leeyihiin ay tahay maalinta ay doorashadu taagan tahay oo ay ku ciil bixi karaan oo qofka dadka iyo dalkaba wax u taraya ay doortaan.
Waxa isaguna halkaasi ka hadlay guddomiyaha xilka wareejiyay Mr: Guuleed, waxaanu sheegay in intii uu xilka hayay uu wax qabad la taaban karo sameeyay isaga oo sheegay in uu sameeyay maamul fidin dhinaca dhalinyarada ah heer degmo iyo heer maamul, waxaanu xusay In dhalinyarada garabkoodu ay gaadhay dimuqraadiyada ay iska dhex doorteen hogaan cusub iyada oo uu hore guddoomiyuhu u magacaabi jiray hogaanka dhalinyarada.
Waxa isagauna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegay C/raxmaan Cismaan Jaamac oo ka waramay duruufaha baahsan ee haysta dhalinyarada ku nool somaliland ee ay ka mid yihiin shaqo la’aanta, balwada iyo tahriibka.
Waxa uu guddoomiyuhu uu xusay in ay halkaasi ka sii wadi doonaan xilka loo dhiibay isla markaana ay sii laban laabi doonaan dedaalkii uu sameeyay hogaankii hore.
Gabagabadii xafladaasna waxa shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ashkaas iyo shirkado ay sheegeen garabka dhalinyarada ee xisbga ucid ay ku heleen taageerada iyo adeegyada ay u fidiyaanshacabka
Shirkadaha iyo akhshaastaana waxa ka mid ahaa Boobe Yuusuf Ducaale, Dr: Maxamed Rashiid Sheekh Xasan, Dallada Haweenka ee Negaad, Dallada Dhalinyarada ee SONYO iyo xubno kale.